एक मच्छडको आत्मकथा - Tesro Ankha
1041 पटक पढिएको
अफिसमा पस्नासाथ रिसेप्सनबाट मैले एउटा पुलिन्दा पाएँ। रिभ्युका लागि आएको किताब होला भनेर खोल्न हतार गरिनँ। साँझ घर फर्किने बेला के रैछ भनेर खोलेँ। भित्र तहतह मिलाइएका थोत्रा कागजका पन्ना थिए। एकदम केरमेट। कसैले रिभ्युका लागि पान्डुलिपि नै पठायो कि भनेर हाँसेँ। नागरिक विकेन्डका साथीहरूले पनि रमाइलो माने। फुटबल हेर्न राति १२:१५ कुर्नु त छँदैछ। त्यही बेला पढ्न हुन्छ भनेर पुलिन्दा काखीमा च्यापेँ।
‘एई रन्डी, नकरा।’ बाबाले आमैको खुट्टा समाएर पछारे, ‘दिनभरि को नाठोसित जान्छेस्? यसरी त कोही सधैं सुत्केरी हुँदैन। तेरा बाउको खा छैन।’
एक दिन आमै रगत पिउन निस्किन्। राति अबेरसम्म आइनन्। मलाई खुबै चिन्ताले समायो। मान्छेहरू अचेल के-के जाती धुप बाल्छन्, त्यै सुँघेर ढलिन् कि? म रातभर छट्पटिएँ। बिहानपख आमै आइपुगिन्।
कति घरका झ्यालमा जाली लगाइएको थियो, छिर्ने नसकिने। कुनै घरको झ्याल खुल्लै देखेर भित्र पस्न खोज्यो कि
ज्यानमारा धुपको गन्धले अत्तालिएर बाहिर निस्कन्थेँ। यस्तो धुपको विज्ञापन मैले सुपरमार्केटको टिभीमा देखेकी थिएँ। त्यहाँ हाम्रो खुबै बेइज्जत गरिएको हुन्थ्यो। कसैको घरभित्र छिर्‍यो झुल टाँगेको देख्थेँ, रन्थनिँदै बाहिर निस्कन्थेँ। सधैँ रगत जुर्न गाह्रो हुन थाल्यो।
‘म चोर्न जान्दिनँ।’ केटोले सानै स्वरमा भन्यो, ‘म पापको धनले सुनको पलङ किन्न सक्दिनँ। सुत्नु छ भने यैमा सुत्। यै हो
‘बैनी, काठमान्डु आउँदा हामी जाजरकोट पनि ग’का थ्यौं।’ त्यही रात उसले उड्दै सुनाइएकी थिई, ‘त्यहाँका मान्छेलाई टोक्नासाथ हाम्रा सारा सन्तान छेरपटी लागेर मरे।’
‘त्यहाँका मान्छेका रगत खोई कसले सिनित्तै पारेछ।’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँका मान्छे त छेर्दै- वाक्दै मर्दारैछन्। काठमान्डुबाटै ग’का पत्रकारले सुनाका थे। तिनको रगत त तिनकै सर्कारले सिनित्तै पार्छ रे! होला र?’
‘डोन्ट वरी।’ अर्कोले चुस्की लगाउँदै भन्यो, ‘यस्पालि गोलपोस्ट खाली छ, जति गोल गरे’नि हुन्च। कुम्भकर्णझैं निदाउनुस्।
उठ्दा सारा देश तपाईंकै हत्केलामा। नरिवलझैं जति उफार्नुस्, उफार्नुस्। हाहाहा।’
ऊ फराकिलो पलङमाथि लतारिएको झुलको चेप उघार्दै भित्र पस्यो। पलङको कुनामा मोटी महिला पनि थिइन्। उसले
महिलाको कानमा भन्यो, ‘सुन्यौ? कुरा मिल्यो।’
त्यसपछि आमा फर्किनुभएन। हामीले धेरै कुर्‍यौं। आमाकै सुर्ताले बाबा पनि बित्नुभो। म काठमान्डुमै छु र एक्ली छु। रगत पिउन नपाएर सधैं बिरामी पर्छु। कहिले मर्छु, थाहा छैन। हामी मच्छडको त के कुरा भो र! नालीमै जन्मिन्छौं, नालीमै मर्छौं। हाम्रो नियति नै यही हो। हामी नहुनु तपाईंहरूलाई आनन्द नै होला। तर, हामी नभए पनि मच्छडहरू कहिल्यै सकिने छैनन्।
किनभने अब त मान्छेहरू नै ठुल्ठुला मच्छड हुन थालेका छन्।
मान्छेकी भए पनि, मच्छडकी भए पनि आमा त आमा नै हुन् नि, हैन र? मलाई मेरी आमाको खुब माया लाग्छ। मेरी आमाको कथा कहिल्यै गुमनाम नहोस् !
२०७५ असार १० २३:२०